Oovimba be-AUDNZD-Funda ukurhweba
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUD / NZD-nge-4 kaJanuwari
I-AUD / NZD ithengise ngomjikelo osecaleni kwiseshoni ye-Yurophu, phakathi kokuvuselelwa komngcipheko wokutya.
Kulo nyaka, i-Aussie kunye ne-Kiwi kulindeleke ukuba baqhube kakuhle, njengoko bebeya kuqiniswa zizinto ezininzi, ikakhulu becinga ngeCoronavirus. Zombini i-Australia kunye ne-New Zealand zibonise ukusebenza ngokukuko ekusasazeni intsholongwane kwi-bud ngokusebenzisa iindlela ezaneleyo zokufumana umkhondo.
Ithemba lokuba uqoqosho lunokuphinda lubuye kwakhona kwingxaki yezemali ebangelwe yi-COVID-19 igcwele ngokupheleleyo, kuthathelwa ingqalelo ukukhutshwa ngempumelelo kwezitofu zokugonya. Kananjalo ukonyusa imali eyongezelelweyo evela koorhulumente kuya kubonelela ngenkxaso yezemali.
Ngeli xesha, uqoqosho lwase China kulindeleke ukuba lubone ukungangqinelani kwiinyanga ezizayo, eziphakamise ibango lezinto zase-Australia ezinje ngentsimbi. Le nto isisiseko sesinye sezizathu zokuba i-AUD kulindeleke ukuba ithengise ngokuqinileyo ngokuchasene ne-NZD kwiintsuku ezizayo kunye ne-2021 xa iyonke. Oko kwathethi, amathemba e-Aussie ngokuchasene nezinye izibini ze-forex kwi-2021 ixilongo le-Kiwi.
Eyona nto ixhalabisayo kwezoqoqosho zombini ngo-2021 yintengiso yabasebenzi. Ekupheleni kweNew Zealand, umbono awuqinisekanga. Ngokwe-Australia neNew Zealand Banking Group (i-ANZ), "imida evaliweyo ithetha uqoqosho oluncinci kwaye iimpembelelo zokudodobala koku akunakuphepheka." Iirhafu ezingalunganga zeNew Zealand ngo-Matshi zinokuqinisekiswa ukuba uqoqosho lusilele ukugcina ukubuyela kwimeko yesiqhelo.
I-AUDNZD-Itshathi yeeyure ezi-4
Uqikelelo lwexabiso le-AUD / NZD yeXabiso- ngoJanuwari 4
I-AUD / NZD Bias enkulu: Iindlela
Amanqanaba okubonelela: I-1.0700, 1.0750, kunye ne-1.0800
Amanqanaba okufuna: I-1.0670, 1.0600, kunye ne-1.0550
I-AUD / NZD okwangoku ithengisa kumandla asecaleni ecaleni koxinzelelo lwengqondo lwe-1.0700. Oko kwathethi, silindele ukubona ukubuyela kwindawo eyi-1.0678 (i-50 SMA) ukuya kumazinga aphezulu e-1.0700.
Njengoko kubonisiwe apha ngasentla, amandla okutshintsha okwangoku axhasa i-AUD, ngaloo ndlela enciphisa amathuba okuhla kwexesha elikufutshane.
tags AUDNZD, Forex, iindaba
Uqikelelo lonyaka lwe-AUD / NZD (2021): I-Bullish Runs ngaphambili
Ukuhlaziywa: 28 Disemba 2020
Iibhanki zokugcina i-Australia (i-RBA) kunye ne-New Zealand (i-RBNZ) ziye zapapasha umbono ongenathemba nge-2021, eya kuthi ichaphazele i-Aussie ne-Kiwi.
I-AUD / NZD, emele ixabiso ledola lase-Australia ngokwe-Kiwi, isondeza unyaka ophakamileyo kunokuba iqale phakathi kokuhla kwamaxabiso e-equity kunye namandla. Oko kwathethi, i-Aussie yayinonyaka osempilweni ngokuthelekiswa ne-NZD.
Okwangoku, zombini i-RBA kunye ne-RBNZ bawanciphisile amaxabiso abo kulo nyaka. I-RBA isike ithagethi yexesha elifutshane ukusuka kwi-0.75% ukuya kwi-0.25%, ngelixa ibhanki yaseNew Zealand isike amaxabiso asuka kwi-1.00% ukuya kwi-0.25%.
I-AUD yeyona nto iphambili kuzo zombini ezi mali, oko kuthetha ukuba ihlala izuza ngakumbi kwimvakalelo yomngcipheko kwaye ihlupheka ngakumbi kwiimarike ezinobungozi ezimbi kune-NZD. Nangona kunjalo, into enokuqhubeka ixhasa i-AUD ngo-2021 bubungakanani boqoqosho lwase-Australia.
Kwi-2018, i-GDP yase-New Zealand yayikwi-US $ 205 yezigidigidi, ngelixa amanani e-Australia engena nge-US $ 1.43 trillion-ephantse iphindwe kasixhenxe kunale yaseNew Zealand. Oko kwathiwa, uqoqosho olukhulu ngokwenyani luqinisa ukutshintsha kweFX-ebonelela ngemali esisiseko kunye nokufunwa okukhulu- xa kuthelekiswa nencinci.
Ngayo yonke loo nto engqondweni, kuhlala kungacacanga ukuba ikamva liphethe ntoni kuzo zombini ezi mali, kuthathelwa ingqalelo umngcipheko ojikeleze iimveliso, amandla kunye neemarike zokulingana, phakathi kobhubhane we-COVID-19. Nangona kunjalo, i-2021 ijongeka ilunge ngakumbi kwi-AUD ngaphezulu kwe-NZD.
Uqikelelo lwexabiso le-AUD / NZD - 2021
I-AUD / NZD 2021 Bias: Ukunyusa
Amanqanaba okubonelela: I-1.1000, 1.1200, kunye ne-1.1300
Amanqanaba okufuna: I-1.0550, 1.0400, kunye ne-1.0200
Ngaphandle kokuba unyaka ongathandekiyo, i-AUD / NZD ijikeleze ngcono kunokuba iqale unyaka. Kakade, amathemba e-2021 (ngokwembono yezobuchwephesha) ibonakala inomdla kakhulu kwisibini, kuthathelwa ingqalelo ukuba isukile kwisiseko sejelo lethu elinyukayo ekuqaleni kukaDisemba kwaye ngoku isendleleni eya phezulu kwisitishi.
Oko kwathethi, ulindelo lwethu oluphezulu lwe-AUD / NZD ngo-2021 limi kwi-1.1300 (ukumelana kweminyaka emithandathu), ngelixa elona xabiso lethu liphantsi lonyaka omtsha li-1.0000 (elona xabiso lakha laphantsi).
tags AUDNZD, yaqikelelwa, Forex
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUD / NZD-nge-21 kaDisemba
I-AUD / NZD igcine umfutho wokuqhubela phambili ngeseshoni yorhwebo ngoMvulo, phakathi kwemeko yentengiso ekhuselekileyo emngciphekweni. Ukwehla kwemeko yomngcipheko ebonwe ekuqaleni kweveki kubeke iAussie neKiwi ngasemva xa kuthelekiswa nezinye iimali ezinkulu. Uvakalelo lomngcipheko lubangelwe luloyiko ngaphezulu koxinzelelo olusandula ukufunyanwa lweCoronavirus ebulalayo e-UK.
Kwangoko namhlanje, urhulumente waseNew South Wales ubhengeze ukuba abanye abahambi abavela e-UK babephethe uhlobo olutsha lweCoronavirus.
I-Australia kunye ne-New Zealand bakusingathe ukuqhambuka kwe-COVID-19, njengoko i-Australia ixele nje iimeko ze-15 emva kokwenza iimvavanyo ezingama-38,000 ngoMvulo Nangona kunjalo, amazwe ase-Australia anyanzelisa imiqobo yokungena kubahlali baseSydney ukugcina uhlobo olutsha lwentsholongwane efumaneka eNew South Wales kuphela.
Okwangoku, i-Aussie ayikhange isabele kwiindaba zokuqhambuka kwamva nje, kodwa abacebisi baqikelela ukuba ingxelo izakuthatha imali ngokukhawuleza.
Kwezinye iindaba, idatha yakutshanje evela eNew Zealand ibonise ukuba ukuChithwa kweKhadi letyala ngoNovemba kwehle nge-5.6% YoY. Nangona kunjalo, olu phuhliso luqinisekileyo alukhange lubonwe okanye lungahoywa ngabathathi-nxaxheba kwimarike.
Kwakhona iBhanki yaBantu yase China (PBoC) ichaze isigqibo sayo senqanaba lesantya kwiseshoni ye-Asia namhlanje. Le ngxelo ikwazile ukonyusa imeko yeemarike okoko ikhutshiweyo.
Uqikelelo lwexabiso le-AUD / NZD yeXabiso- nge-21 kaDisemba
I-AUD / NZD Bias enkulu: Ukunyusa
Amanqanaba okubonelela: I-1.0725, 1.0800, kunye ne-1.0830
Amanqanaba okufuna: I-1.0670, 1.0650, kunye ne-1.0600
I-AUD / NZD iyaqhubeka nokuthengisa ishaneli yethu enyukayo, ngaphandle kobuthathaka kuzo zombini iimali. Esi sibini sibonakala sithatha isigqibo ekunyukeni kwaso kwaye kunokwenzeka ukuba sibethe ukumelana ne-1.0725 ebalulekileyo kungekudala.
Nakuphi na ukuwa kwinqanaba langoku kufuneka kuphendulwe kwinqanaba le-1.0670 (isiseko sejelo lethu). Ukuwa okulandelayo kufuneka kuxhaswe ngumgca we-1.0650.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUD / NZD-nge-14 kaDisemba
I-AUD / NZD ithengise ngomjikelo wecala ngeyure zokuqala zorhwebo ngoMvulo, njengoko yayisokola ukuphula uxhathiso lwe-1.0650. Ngexesha lokushicilela, isibini se-forex sithengisa nge-1.0649, sinyuke nge-0.07% ngosuku.
Izibhengezo zemisebenzi e-Australia zadibana okwesixhenxe zilandelelana ngo-Novemba, ngelixa ilizwe lesibini elinabemi abaninzi, iVictoria, liphuma ngaphandle. I-Australia ne-New Zealand Banking Group (i-ANZ) baxele ukuba isibhengezo semisebenzi sikhule nge-14% ngo-Novemba kwingxelo zayo zamva nje.
Oko kwathethi, iqela libike kwingxelo yalo yeveki ephelileyo ukuba iintengiso zomsebenzi zinokubuyela kumanqanaba abo e-COVID yangaphambili nangaphezulu ukuphela kwe2020.
Okwangoku, umlinganiso wabathengi baseAustralia bahlanganisana kwinyanga yesine ngokulandelelana ngoDisemba kwaye babetha iminyaka eli-10 ephezulu njengoko ilizwe liyenza lula imiqobo yayo yokutshixa i-coronavirus kwaye iphinde ivule imida eliqela. I-Westpac-Melbourne Institute index yeemvakalelo zabathengi, ekhutshwe ngoLwesithathu odlulileyo, inyuke yaya kwi-4.1% ngoDisemba ukusuka kwi-2.5% kwinyanga ephelileyo.
Kwezinye iindaba, kwiveki ephelileyo yayintle i-Kiwi, kulandela iingxelo ezilungileyo ezivela kwicandelo lemveliso laseNew Zealand. Amanani oThengiso lweMveliso yokuThengiswa angene nge-10%, ngelixa i-BusinessNZ Imveliso Index inyuke yaya kwi-55.3 ngo-Novemba.
Ukuqhubela phambili, ukugxila kwimarike kuya kuba kwiMizuzu yeNtlanganiso kaDisemba yeBhanki enguVimba yase-Australia, ecwangciselwe ukukhutshwa ngomso. Ngapha koko, i-China izakukhupha iiMveliso zayo zoRhwebo kunye neeRetail Sales iingxelo ngomso ngokunjalo, ezinokuba nefuthe elibonakalayo kulawulo lweAussie naseKiwi.
Uqikelelo lwexabiso le-AUD / NZD yeXabiso- nge-14 kaDisemba
Amanqanaba okubonelela: I-1.0650, 1.0700, kunye ne-1.0725
Amanqanaba okufuna: I-1.0600, 1.0550, kunye ne-1.0500
I-AUD / NZD isilele, kwimizamo eliqela, yokophula ngaphezulu komgca wokumelana ne-1.0650 njengokumisela ukudityaniswa kwesibini. Nangona kunjalo, isibini semali siyarhweba ngaphakathi kwendlela enyukayo, ebonisa ukuba iinkunzi zeenkomo zilawulwa ngokupheleleyo.
Ukwehla kumjelo owehlayo odlulileyo kufuneka ufumane inkxaso kwi-1.0600 ngeenxa zonke. Nangona kunjalo, ikhefu elingaphantsi kwalo mgca linokubeka u-uptrend wangoku kubango lweebhere.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUD / NZD-nge-30 kaNovemba
I-AUD / NZD ithengise ngokungathandekiyo kwiiyure zaseYurophu zakuqala ngoMvulo, zozibini iimali ezilwela ukulawula njengoko zombini zinezinto ezilungileyo ezibangqongileyo.
Izinto zorhwebo ziyaqhubeka ukomeleza i-Aussie, ngemilinganiselo yemihla ngemihla yokuthumela impahla yorhwebo e-Australia ikufutshane neminyaka esi-7, njengoko intsimbi ithengisa ngaphezulu kwe- $ 125 ngetoni nganye.
Ngo-Novemba ibiyinyanga elungileyo kuqoqosho lwase-Australia njengoko besibona idatha elungileyo evela kwintengiso kunye nemisebenzi, ngelixa ukuvulwa komda kwilizwe liphela kwandise ukuzithemba ngakumbi ekubeni amanyathelo okunciphisa i-RBA aya kuvelisa iziphumo ekujoliswe kuzo.
Ngeli xesha, Inkcitho yabucala yase-Australia iye yehla ngaphantsi kokulindelekileyo kwikota yesithathu yowama-2020, njengoko idatha epapashwe liziko leenkcukacha-manani lamazwe (i-ABS) libonise kwiveki ephelileyo. Inkcitho entsha yenkunzi ihle ngesi-3% kwikota kaSeptemba ngokuchaseneyo noko bekulindelwe ngokubanzi -1.5%.
Kwezinye iindaba, i-PMI yokuThengisa ye-NBS yamaTshayina ikhule ngaphaya kokulindelekileyo kweemarike kwaye yangena nge-52.1, ngelixa i-PMI engeyiyo eyokuthengisa ingene ngo-56.4 ngo-Novemba. Olu khululo lwedatha lwalulungile, ngakumbi kwi-Kiwi, eyathi yaqiniswa ngumbono oqinisekileyo ovela kwi-ANZ yoShishino lwentembelo yaseNew Zealand.
Ngezinto ezisisiseko ezithandayo zozibini iimali, sijikela kwimiqondiso yezobuchwephesha ukubonelela ngengqondo kwinto enokwenziwa yi-AUD / NZD kwikota ekufutshane.
Uqikelelo lwexabiso le-AUD / NZD yeXabiso- nge-30 kaNovemba
I-AUD / NZD Bias enkulu: Ukukhupha
Amanqanaba okubonelela: I-1.0520, 1.0600, kunye ne-1.0650
Amanqanaba okufuna: I-1.0485, 1.0400, kunye ne-1.0350
I-AUD / NZD iwele ngezantsi komgca we-1.0520 kwaye isilele amatyeli aliqela ukubuyisa loo mgca. Oko kwathiwa, sinokulindela ukubona ukuhla okuzinzileyo kwesi sibini ukuya kwisiseko sejelo lethu elihlayo kwaye emva koko kwindawo ye-1.0400. Kuphela sisigqibo esinqumlayo ngaphezulu komgca we-1.0520 esinokuthi siphelise amandla akhoyo ngoku e-bearish.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUD / NZD-nge-23 kaNovemba
Ukuhlaziywa: 23 Novemba 2020
I-AUD / NZD ithengise ngento elungileyo kwiseshoni yaseYurophu yokuqala, emva kokukhutshwa kwedatha elungileyo evela e-Australia ngolwe-Sihlanu.
I-Commonwealth Bank yaseOstreliya (i-CBA) ikhuphe ukufundwa okungcono kunoko bekulindelekile kwimveliso ye-PMI ka-Novemba. Ngenxa yoko, i-PMI edibeneyo yabona ukonyuka okufanelekileyo.
Kwakhona, i-ASX 200 yongeze inkxaso eyongezelelweyo kwi-Aussie kulandela ukubuyela kwayo okuhle kwiveki ephelileyo.
Okwangoku, kuye kwaxelwa ukuba uNondyebo wase-Aussie uJosh Frydenberg utyikitye ulwandiso lokunciphisa irhafu kumashishini asekhaya kweli. Olu phuhliso lwakutsha nje, njengoko luqinisekisiwe nguVavanyo lwezeMali lwase-Australia (i-AFR), luqinise ithoni yomngcipheko ojikeleze iAussie.
Kwezinye iindaba, iNew Zealand inike ingxelo yokuthengisa okungcono kunokulindelweyo kwe-Q3 yokuThengisa kunye nokuThengisa okuThengisayo, ebonisa ukuphucuka okukhulu kuqoqosho lwelizwe.
Idatha yongezwa kwithoni elungileyo ebimiselwe ngumgaqo-nkqubo weBhanki enguVimba yaseNew Zealand. Nangona iRhuluneli ye-RBNZ u-Adrian Orr icaphule umfanekiso omdaka wobukho be-COVID-19 kwihlabathi liphela kwintetho yakhe yamva nje, iRhuluneli yema ngokuqinileyo ngokuchasene namaxabiso amabi kwixesha elikufutshane ngelixa ibonga ukusebenza koqoqosho lwePasifiki ebusweni besi sifo.
Uqikelelo lwexabiso le-AUD / NZD yeXabiso- nge-23 kaNovemba
Amanqanaba okubonelela: I-1.0600, 1.0650, kunye ne-1.0725
Amanqanaba okufuna: I-1.0520, 1.0485, kunye ne-1.0400
I-AUD / NZD okwangoku ithengisa ngetoni yokuqhubela phambili kulandela ukubuyela kwayo kwinqanaba lokuxhasa le-1.0520. Oko kwathethi, sinokubona esi sibini sisenza ikhefu lokumelana ne-1.0600 kungekudala. Lo mzuzu wokuphakanyiswa okucetywayo kuya kupheliswa ukuba i-AUD / NZD ibona ikhefu elizinzileyo lingaphantsi kwenkxaso ye-1.0520.
Nangona kunjalo, ngenxa yokuba isisiqalo seveki kwaye ukungazinzi kunqabile, kufanelekile ukuba silindele intshukumo esecaleni kwiiyure ezizayo.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUD / NZD-nge-16 kaNovemba
Ukuhlaziywa: 16 Novemba 2020
I-AUD / NZD ithengise icala kwicala leseshoni laseYurophu ngoMvulo, njengoko iBhanki enguVimba yaseNew Zealand (RBNZ) ishiye ireyithi yayo esemthethweni (OCR) ingaguqukanga kwi-0.25% kwaye ithembisa ukugcina iirhafu zayo ngokufanayo kude kube ngoMatshi 2021 .
I-Aussie kunye ne-Kiwi bathengise ngamandla ngokuchaseneyo nezinye iimali eziphezulu zokufunda ngeveki ephelileyo njengesiphumo sokuhlaziywa kwemfuno yeempahla ezinobungozi ngasemva kweendaba ezilungileyo ezinxulumene nesitofu se-COVID-19 esivela ePfizer.
Nangona kunjalo, ithoni yomngcipheko ibulewe lulwazi olutsha malunga neendlela zokuhambisa isitofu, idosi, kunye nobomi besherifu. Ubungozi obuninzi bancitshiswa kukunyuka okungalunganga kwamatyala e-COVID-19 e-United States, egrogrisa ukuphazamisa naluphi na uqoqosho olubalulekileyo kungekudala.
Okwangoku, isibhengezo samva nje se-RBNZ malunga nokushiya i-OCR yabo ingaguqukanga iyaqhubeka ukomeleza amathemba e-NZD ngokuchasene ne-AUD kunye nezinye iimali. I-RBNZ iqalise inkqubo entsha yenkxaso-mali ngoLwesithathu odlulileyo ejolise ekunciphiseni iindleko zababolekisi ngelixa igcina inzala yayo ikwiqondo eliphantsi. Ibhanki ikwakhankanye ukulungela kwayo ukutshintshela kumaxabiso amabi ukuxhasa uqoqosho ukuba kukho imfuneko.
Ukuzibophelela kunye nenkqubo entsha yokuxhasa ngemali-mboleko (i-FLP) yeebhanki inyanzelise iimarike ukuba ziphelise amathemba amaxabiso amabi. Esi sithuba siqhube i-Kiwi ephezulu kwiveki ephelileyo, kwaye sinokubona ukuqhubeka kokuqhubekeka kule veki.
I-AUD / NZD-Itshathi yeeyure ezi-4
Uqikelelo lwexabiso le-AUD / NZD yeXabiso- nge-16 kaNovemba
Amanqanaba okubonelela: I-1.0725, 1.0844, kunye ne-1.0934
Amanqanaba okufuna: I-1.0600, 1.0500, kunye ne-1.0400
Iinkunzi ze-AUD / NZD zihlala kumlo wokukhusela inkxaso ye-1.0600 yengqondo. Ikhefu elingaphantsi kwelo nqanaba linokubangela ukwehla okuhlaziyiweyo kwinkxaso ye-1.0500 kunye nokuhla.
Ngokunikwa amandla okwangoku ajikeleze i-NZD, ukuqhubeka okuqhubayo kwi-AUD / NZD kubonakala kunokwenzeka kakhulu ngalo mzuzu.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUD / NZD-nge-9 kaNovemba
I-AUD / NZD ithengise kuluhlu oluqinileyo phakathi kwe-1.0685 kunye ne-1.0725 kwiseshoni ye-Europe yangoMvulo kwaye yagqityelwa ukurhweba ngo-1.0725.
NgoLwesihlanu, i-Australia ikhuphe i-AIG Performance Index Index, ebonise ukuphucuka okufanelekileyo ukusuka kwi-36.2 ngo-Septemba ukuya ku-51.4 ngo-Okthobha.
Ngeli xesha, iAussie irekhode ukwehla okwethutyana ngolwe-Lwesibini, kulandela isigqibo seBhanki enguVimba yase-Australia. Njengoko bekulindelwe ngokubanzi, i-RBA ibhengeze ukuba iyakunciphisa inzala yayo irekhodi eliphantsi nge-0.01%. Kananjalo, abenzi bomgaqo-nkqubo weRBA baxele ukuba baceba ukuthenga i-AUD 100 B ye-5y-10y bond kwiinyanga ezintandathu ezizayo. Nangona oku kunokuba neziphumo ezonakalisayo kwi-AUD, iRhuluneli yeRBA uPhilip Lowe uhlala enethemba malunga nethemba elikufutshane lenkqubela phambili yezoqoqosho kwilizwe, esongeza ukuba akunakulindeleka ukuba ibhanki ipapashe amaxabiso amabi.
Oko kwathethiyo, kugxilwe kubarhwebi be-AUD / NZD ngoku kuya kutshintshelwa kwisigqibo somgaqo-nkqubo we-Reserve Bank yaseNew Zealand ngoLwesithathu.
Nangona kulindeleke ukuba abenzi bomgaqo-nkqubo we-RBNZ bashiye inzala ingatshintshi kwi-0.25%, kulindeleke ukuba babhengeze isixhobo esitsha somgaqo-nkqubo wezemali kwintlanganiso yangoLwesithathu yokunyusa iindleko zokuboleka ababolekisi kunye nokunyusa ukukhula kwezoqoqosho.
Uqikelelo lwexabiso le-AUD / NZD yeXabiso- nge-9 kaNovemba
Amanqanaba okubonelela: I-1.0750, 1.0800, kunye ne-1.0844
Amanqanaba okufuna: I-1.0650, 1.0600, kunye ne-1.0500
I-AUD / NZD kungoku nje ithengisa ngomfutho osecaleni njengoko iimarike zisukela kunyulo lwe-US olwenziwe kwiveki ephelileyo. Esi sibini sithengisa ngaphakathi kwejelo elihlayo kwaye silindele ukuba isantya esilandelayo sibe se-bearish, ngokunikwa imeko yemicimbi ejikeleze i-AUD.
Oko kwathiwa, sinokubona ikhefu lexeshana ngaphezulu kwe-1.0725 ukumelana, kulandelwe ukwehla okongeziweyo kwinqanaba le-1.0600.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUD / NZD-nge-2 kaNovemba
Ukuhlaziywa: 2 Novemba 2020
I-AUD / NZD iqhubekile nokungakhathali kwiseshoni yaseNyakatho Melika ngoMvulo. Ngexesha lokushicilela, isibini siyarhweba nge-1.0630, sikhuphuke nge-0.03% ngosuku.
Ukukhula komngcipheko wemarike okhulayo ngoku kunceda i-Aussie (AUD) kunye ne-Kiwi (NZD) ukufumana imfuno ethobekileyo ngokuchasene nezinye iimali phambi kwesibhengezo seRBA ngomso. Nangona kunjalo, uninzi lwabacebisi abalindele ukuba ireyithi enqunyulwe kwi-RBA, i-Aussie inokuphinda iqhubeke kwisilayidi esezantsi ngokuchasene ne-NZD. Silindele ukuba ibhanki engundoqo yehlise inzala yayo nge-15 bps iye kwi-0.10%.
Ngeli xesha, i-PMI yaseTshayina yokuThengisa i-PMI yayijongene nethoni yomngcipheko ehlaziyiweyo kwiimarike zonke ngoMvulo, ethande iKiwi ngakumbi. Nangona kunjalo, inani elonyukayo lamatyala e-Coronavirus kunye nokuhlaziywa kwezithintelo zokutshixwa kwi-Eurozone kunokuphazamisa naziphi na izibonelelo ezibalulekileyo kwi-NZD okwangoku.
Nangona kunjalo, ukuthanda umarike kuya kuxhomekeka kwisiphumo soNyulo lukaMongameli wase-US wangomso.
Uqikelelo lwexabiso le-AUD / NZD yeXabiso- nge-2 kaNovemba
Amanqanaba okubonelela: I-1.0700, 1.0725, kunye ne-1.0800
Ngelixa i-AUD / NZD ihleli kuluhlu lokudityaniswa phakathi kwe-1.0636 kunye ne-1.0600, kubonakala ngathi isibini sihamba kancinci kancinci. I-AUD / NZD iyaqhubeka nokurhweba ngaphakathi kwejelo lethu lokuhla elinenyanga ezi-3 kwaye iya kuqhubeka kuloo ndlela inikezwe ulindelo lwangoku olujikeleze i-AUD.
Okwangoku, isibini siya kuzama ukophula ngaphezulu kwe-50 SMA ngo-1.0642. Ikhefu eliyimpumelelo ngaphezulu kwalo mgca liya kuseta ikhosi yalo iye kwinqanaba le-1.0700, apho sinokudibana khona kwezalathi (umgca wokumelana nengqondo, i-100 SMA, ngaphezulu kwesitishi esinyukayo), okwenza kube nzima nangakumbi ukwaphula ngaphezulu.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUD / NZD-Okthobha 12
Ukuhlaziywa: 12 October 2020
Kwangoko namhlanje, amandla e-bearish ajikeleze i-yuan yase-China athabathe ukulandela isigqibo seBhanki yaBantu yase-China (PBoC) yokunciphisa umngcipheko wokugcina umngcipheko kwi-FX. Oku kubangele ukungahambi kakuhle kwi-AUD, kuthathelwa ingqalelo ubudlelwane boqoqosho lwase-Australia kunye ne China.
Ngapha koko, igolide (i-XAU / i-USD) igxadazile uninzi lwanamhlanje kulandela irali eyomeleleyo kwiveki ephelileyo, eyandise ubuthathaka obongezelelweyo kwiAussie.
Ngeli xesha, iBhanki enguVimba yaseNew Zealand ibizimisele ukukhokela phambili, ethathwa njengesiganeko esinqabileyo, inikwa indlela efanayo yokuthumela isikhokelo kwezinye iibhanki eziphambili kwihlabathi liphela.
Iingxelo ezivela kwi-RBNZ eyiNtloko yezoQoqosho u-Yuong Ha kwiveki ephelileyo zazingalindelwanga, njengoko wathi ibhanki ephambili kufuneka "yenze ngokukhawuleza kakhulu kunakuqala kakhulu." Ngokumalunga namazinga enzala amabi, i-Chief Economist yatsho ukuba i-RBNZ ithathela ingqalelo ulawulo lwenqanaba.
Ngenxa yesibhengezo, i-NZD ikwanobuthathaka kakhulu ngaphandle kokuqhamka komngcipheko kwimeko yeemarike. Oko kwathethi, i-Kiwi ngoku ithengisa kakubi ngokuchasene nezinye iimali eziphambili, kubandakanya i-AUD.
Ukongeza, uphuhliso lwamva nje kunye ne-PBoC ikwandise ubuthathaka kwi-NZD.
Uqikelelo lwexabiso le-AUD / NZD-ye-Okthobha ye-12
Amanqanaba okubonelela: I-1.0900, 1.0934, kunye ne-1.1000
Amanqanaba okufuna: I-1.0800, 1.0725, kunye ne-1.0700
I-AUD / NZD ithengise ngalo lonke ixesha lanamhlanje ngaphandle kokukhetha. Iseshoni yanamhlanje yayiyinto yomlo ongapheliyo phakathi kwezezimali zombini, okwangoku ezihlaselwa kakhulu ziimeko zabo ezisisiseko.
Kumdibaniso olwenziweyo, esi sibini satyibilika kancinci kodwa sabanjwa kwangoko yi-SMA yeentsuku ezingama-50 kwitshathi yethu yeeyure ezi-4, ebonisa ukuba inqanaba liza kuqhubeka nokuxhasa i-AUD / NZD okwangoku. Oku kukwabonisa ukuba esi sibini sithanda ukungaphezulu, oko kuthetha ukuba sinokubona ukuqhubeka okuqhubayo xa kubuya ukungazinzi.